The Ab Presents Nepal » हेलिकप्टर चढेर बाढी निरिक्षण गर्न गएका मन्त्रि हिलोबाट बच्न कार्यकर्ताको बुई चढेर फर्के!
हेलिकप्टर चढेर बाढी निरिक्षण गर्न गएका मन्त्रि हिलोबाट बच्न कार्यकर्ताको बुई चढेर फर्के!
काठमाडौं-: काठमाडौंबाट गएको उच्च स्तरीय सरकारी टोलीले बुधवार बाढी र डुबानले बढी क्षति पुर्‍याएको प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण तथा अवलोकन गर्‍यो।टोलीमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अन्य मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आदि नेता तथा उच्च अधिकारी थिए’।
त्यस क्रममा उनीहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको जिल्ला रौतहट पनि पुगे।तर उनीहरूले बाढी र डुबानबाट प्रभावित भएका सर्वसाधारणलाई नभेटीकन हेलकोप्टरबाटै अवलोकन गरे अनि स्थानीय अधिकारीहरूसँग त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए।रौतहट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको गृहजिल्ला हो।रौतहटका कतिपय डुबान पीडितहरूले भने आफूहरूले राहत नपाएको र कोही नेता र जनप्रतिनिधि पनि नआएको गुनासो गरिरहेका बेला टोलीले उनीहरूलाई नभेटेरै फर्किएको हो’।
हिलो छल्न कार्यकर्ताको बुई
तिलाठीमा सत्तारुढ नेकपाका एक जना नेता एवं राष्ट्रिय सभा सांसद सुमन प्याकुरेलले बुइ चढेर हिलो छलेको फोटो अहिले भाइरल भइरहेको छ। उनी सोही जिल्लाका नेता हुन्। तस्विरमा उनले पाइन्ट, जुत्ता र कोट लगाएका छन्। हातमा जुत्ता समातेका एक व्यक्तिले उनलाई काँधमा बोकेर अघि बढिरहेको देखिन्छ। यो दृश्य देखेका नजिकैका सेना तथा प्रहरी हाँसिरहेका छन्। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा जुत्ता बचाउन नेतालाई काँधमा बोकिएको चर्चा चुलिएको छ’।
तर यस सम्बन्धमा प्याकुरेलले आफुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको बताएका छन्। खास कुरा त्यस्तो होइन। मलाई प्रेसर छ। त्यही भएर ती भाइले मलाई बोक्न चाहनु भयो। मलाइ रिंगाटा लागिरहेको थियो।बस्न सक्ने अवस्था त्यहाँ थिएन। चिनजानका भाइले बोक्छु भनेर आफैँले आग्रह गरे। मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। मेरो मानवीय अवस्था नबुझी टिका टिप्पणी काम भइरहेको छ। त्यत्रा तीन-तीन जना मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देख्नु भएको छ मेरो अवस्था त्यहाँ के भएको थियो भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिए ‘।
सरकारी टोली किन बाढी पीडितहरूलाई नभेटी फर्कियो त
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किरण थापाले भने टोलीले सुरुमा जाने नै भनेको हो। तर हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्न उपयुक्त छैन भनेर सुरक्षा समितिले भन्यो। त्यही भएर हामीले नै हवाई निरीक्षणका लागि सुझाव दिएका हौँ।’